China PES gbazee nrapado ihe nkiri maka aluminium panel ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | H&H
Ọkpụrụkpụ / mm 0,1 / 0,12 / 0,15
Obosara / m / 1m dika hazie
Mpempe Agbaze 70-112 ℃
Ọrụ nka igwe akpo oku-oku: 150 ℃ 8-12s 0.4Mpa
HD112 bụ ihe polyester mere ngwaahịa. Enwere ike iji mpempe akwụkwọ mee akwụkwọ a ma ọ bụ na-enweghị akwụkwọ. A na-ejikarị ya na mkpuchi aluminum tube ma ọ bụ panel. Anyị na-eme ya obosara nkịtị nke 1m, a ga-ahaziri obosara ndị ọzọ. Enwere ọtụtụ ngwa dị iche iche nke nkọwa a. HD112 eji maka bonding dị iche iche textiles na akwa, ịkwanyere, ABS, PITA na ndị ọzọ plastik, akpụkpọ anụ na iche iche keakamere leathers, meshes, aluminum foil na aluminum efere, na mkpuchi. Anyị nwere ike ime na ọkpụrụkpụ nke 100micron, 120micron na 150 micron.
HD112 Hot gbazee nrapado ịse na ọtụtụ-eji na friji evaporator lamination. Nọmalị ihe lamination bụ aluminom panel na aluminum tube ọkachasị maka ndị aluminom nwere mkpuchi n’elu. E wezụga, dochie ọdịnala mama na-arapara, na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri lamination abụrụla isi ọrụ nke ọtụtụ ndị na-emepụta elektrọnik ejirila kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe nlere a na - ere ire oku na ndida Asia.
PES na-ekpo ọkụ gbazee nrapado film nwekwara ike-eji na ndị ọzọ na ákwà na lamination na metal bonding. Dịka ọmụmaatụ, njikọkọ ọkụ nke ụfọdụ uwe na-enweghị ntụ na akpa. Tụkwasị na nke a, a pụkwara iji ngwaahịa a na ngwa ime ụgbọ ala, dị ka njikọta ọkụ nke ụgbọ ala, uko ụlọ na ngwaahịa ndị ọzọ. PES film nwere a dịgasị iche iche nke ngwa, ma ọ bụ akwa akwa ma ọ bụ metal ihe, bonding arụmọrụ dị nnọọ mma.
Nke gara aga: PO na-ekpo ọkụ gbazee nrapado ihe nkiri maka friji evaporator
Osote: PES ọkụ gbazee nrapado film
PO ọkụ gbazee nrapado film maka refrjiraeto eva ...